မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ အိုးကိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း - Cele Gabar
By RainowPosted on August 5, 2020
မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာနဲ့ ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောကိုဗစ်ကာလ ပွဲတွေရပ်နားထားချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာ ကြက်ကင်နဲ့ အခြားအကင်များကို အွန်လိုင်းကတဆင့်ရောင်းချနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း မွေးရပ်မြေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စတင်ရောင်းခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ လိုက်လံပို့ဆောင်ကာ ရောင်းချနေပါတယ်။ အားပေးကြမ်းလွန်းတဲ့စားသုံးသူတွေကြောင့် ပိတ်ရက်မရှိ ရောင်းနေရသလို အချိန်ပြည့်မီးဖိုချောင်ထဲက မထွက်ရအောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် စတူဒီယိုက ပုံရိပ်တချို့နဲ့ အတူ သတင်းကောင်းလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
” Something is coming very soon!! အမိုက်စား တစ်ခုမကြာခင်လာမယ်နော်…. မီးဖိုချောင်ထဲဟင်းအိုးပဲ ကိုင်နေတာမဟုတ်ရပါပုနော်… Studio ထဲမိုက်လည်းကိုင်‌ နေပါတယ်လို့” ဆိုပြီးရေးသားကာ ပရိသတ်တွေအတွက် အမိုက်စားတစ်ခုစီစဉ်နေကြောင်း မျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဟင်းအိုးလည်းကိုင်နေသလို သီချင်းအသစ်စောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း စတူဒီယိုသွားနေပါပြီတဲ့နော်။
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Mai Mai Seng, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, မိုင်းမိုင်ဆိုင်း
Previous post လွမ်းမောစရာခံစားချက်လေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
Next post အမှန်တရားကို သိစေချင်လို့ အဖွဲ့လိုက်စကားပြောထားတဲ့ Group Chat ကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း